I-ClearTrace | Ama-Franchise | I-Franchiseek
UCleartrace unikeza ithuba elihle le-franchise ngokubuya okusheshayo njengoba sizolungiselela inkontileka neklayenti lamanje elizokunikeza lona lapho uqeda ukuqeqeshwa.
Selokhu lasungulwa ngonyaka ka-2008, abakwa-DeleTrace bathole isithunzi ngezinsizakalo zokuhlanza abakhethekile kanye nokulawula ukunqanda ukutheleleka kuwo wonke umkhakha wezokwelapha. Sikufakazisile kule minyaka eyishumi edlule ukuthi singcono kakhulu kulokho esikwenzayo ensimini yethu.
Umsebenzi wethu we-franchisee uhla lwamakhasimende ahlukahlukene, kufaka phakathi ukuhlinzwa kwe-GP, ukuhlinzwa kwamazinyo, abahlinzeki be-Ambulensi, Abahlinzeki bezindlu abanakekelayo nanoma yiziphi izikhungo zezempilo eziphathwayo. Sisebenza nezinkampani ezihamba phambili, ngakho-ke kudingeka sinikeze insiza engcono kakhulu. Izinsizakusebenza esisebenza kuzo ziqinisekisa isizinda samakhasimende esiqinile nesiphephile.
Sisebenza ngaphakathi kohlaka lwe-ISO90001 Lokuvikela Ukuvimbela Ukutheleleka, empeleni sabhala uhlaka lwe-ISO90001 Lokuvimbela Ukuvimbela Ukutheleleka, ngakho-ke amakhasimende angaqinisekiswa ukwethenjwa kwethu nobuqotho bethu ekuhlinzekweni kwezindawo zokuhlanza zokuhlanza.
I-OpenTrace iyigunya elaziwayo ekuhlanzeni okusebenzayo kwezikhungo zezokwelapha zokuhlanza ezokwelashwa zisebenzisa amabanga wethu wamakhemikhali ahola embonini yethu.
Kubiza malini? Futhi yini engiyitholayo?
Ukutshala imali ephelele kungama- $ 20,000 + vat. Lokhu kufaka phakathi ilayisense yokuhweba nokuqeqeshwa, kanye nokuqala izimpahla, amakhemikhali, ukuqeqeshwa kwamasonto ayi-12 nokuxhaswa kwebhizinisi okuqhubekayo. Izindawo zinokuphana, indawo ngayinye inamabhizinisi amaningi esingasebenza nawo.
Ithimba lethu lehhovisi lekhanda lizokusiza kusuka ngosuku lokuqala, sizokusiza ngakho konke ukuhlela kwebhizinisi lakho. Ngemuva kwalokho sizosebenzisana kakhulu nawe ukusetha i-clearTrace Franchise yakho. Inqubo ephelele ithatha amasonto ayi-12, kepha sizohamba ngejubane elikhululekile nawe.
Iphakheji yokuqalisa ifaka:
Uhlelo lokuqeqeshwa lwamasonto onke ayi-12
Ukuxhaswa komuntu siqu nokungenamkhawulo ngokuhlela kwebhizinisi
Ukuqeqeshwa nokusizwa ekutholeni umyalezo wethu kumakhasimende
Xhuma maviki onke kumakhasimende amasha
Imishini yokuqalisa namakhemikhali
Uzokwenza zonke izinqumo ezibalulekile, ibhizinisi lakho ngemuva kwakho konke. Kepha siyohlala sikhona ngezeluleko nanoma yiluphi uxhaso olwengeziwe ongaludinga maqondana nokumaketha, ezezimali noma uqeqesho. Ithimba lethu lehhovisi lekhanda linokuhlangenwe nakho kweminyaka eminingi ku-franchising. Sizophinde sibambe nokubuyekezwa kwebhizinisi linye kuya komunye kanye nemihlangano yenethiwekhi lapho ungahlangana khona nama-franchisees avela kwezinye izindawo ukuze wabelane ngemibono.
Ukuvumelana nezimo nokuvikeleka
Uma ufuna ithuba lebhizinisi elihlukile, elingabizi futhi umholi kulo mkhakha wakhe-ke uCleartrace angaba ukukhetha kuwe.
Ukuvumelana nezimo kuyinzuzo enkulu ye-Cleartrace Franchise. Ingalawulwa ekhaya noma ehhovisi. Siyala ukuthi sisebenze ngokugcwele ebhizinisini ukuze sandise impumelelo.
Tshala imali ephambili phambili
Isidingo esikhulayo kuwo wonke umkhakha
Ingabe leli lungelo likufanele?
Sifuna abantu abanokuziphatha okuqinile emsebenzini nokuzimisela ukulandela imodeli yebhizinisi efakazelwe. Umnikazi ofanelekile we-DeleTrace ulungile nabantu futhi unamandla okuthengisa nokuthengisa. Akukho okuhlangenwe nakho kwangaphambilini okudingekayo njengoba kuqeqeshwa ngokugcwele